Dawlada Somaliya Oo Si Rasmi Ah U Burisay Heshiiskii Turkiga Lagu Kala Saxeexday Iyo Madaxweyne Silanyo Oo Ku Niyadsan Wada Hadaladu In A Sii Socdaan
Home	Wararka Af Soomaaliga	English News	Arimaha Bulshada	Cayaaraha	Hot Videos	Contac Us	Breaking News Daawo Mudaharaad Ka Dhacay Degmada Boorama Oo Looga Soo Horjeedo Imaanshiiyaha Madaxweynihii Hore Ee AwdalState (Video)	- Wednesday, 18 December 2013 18:31	Madaxweynhii Hore Ee Awdal State Oo Ku Sii Jeeda Degmada Boorama Iyo Moran Ka Taagan Soo Dhaweyntiisa	- Tuesday, 17 December 2013 16:05	Suladaan Saleebaan Oo Ka Hadlay Heshiiska AwdalState Iyo Somaliland, Baaqna U Diray Qurbajooga (Video)	- Tuesday, 17 December 2013 17:43	Tv Laga Leeyahay Wadanka Ingiriiska Oo Booqday Saldhigyada Ciidamada Muhaligiinta Alshabaab Ee Somaliya (Video)	- Tuesday, 17 December 2013 13:55	Cunsuriyiinta (naaziyiinta) Swedan Oo Bilaabay Gacan Ka Hadal, (Video)	- Tuesday, 17 December 2013 01:41	Wednesday, 09 October 2013 12:44	Dawlada Somaliya Oo Si Rasmi Ah U Burisay Heshiiskii Turkiga Lagu Kala Saxeexday Iyo Madaxweyne Silanyo Oo Ku Niyadsan Wada Hadaladu In A Sii Socdaan
Dawladda Somaliya oo taageero ka helaysa Qaramada Midoobay ayaa si rasmi ah u jebisay heshiiskii
u dambeeyay ee ay Somaliland iyo Somaliya ku kala saxeexdeen wadanka Turkiga, kaas oo dhigayay in maamulkii hawada ee labada dal wada jir looga soo celiyo Qaramada Midoobay oo gacanta ku haysa islamarkaana xafiis laga maamulo laga furo caasimadda Hargeysa, kaas oo ay ka shaqayn doonaan guddi wada jir ahi.
Heshiiskaasi, wuxuu u muuqdaa mid ay dawladda Somaliya ka maarantay islamarkaana ay si badheedh ah uga talaabsatay, una burisay. Wasiirka Isgaadhsiinta, gaadiidka iyo boosaha ee Somaliya Cabdillaahi Ciilmooge Xirsi, ayaa heshiis rasmi ah la saxeexday hay’adda ICAO oo maamulka hawada gacanta ku haysay 20kii sannadood ee u dambeeyay. Heshiiskaasi wuxuu dhigayaa inay ICAO maamulkii hawada 1 January 2014 ku wareejiso dawladda Somaliya, waxaana sidoo kale si toos ah dawladda Somaliya loogu wareejin doonaa lacag malaayiin Dollar ah oo mudadaas 20ka sannadood ah ay ICAO ururisay taas oo ah dakhiliga hawada Somaliland iyo Somaliya.
Heshiisku wuxuu ka koobanyahay 12 qodob, waxaana dhinaca ICAO u saxeexay Mr. Ivan Galan oo ka mid ah madaxda hay’adaas. Waxa kale oo qodobadiisa ka mid ah in dawladda Federaalka Somaliya ay masuul ka tahay sida ay dhaqaalahaas Malaayiin Dollar ah ugu qaybinayso wax loogu yeedhay gobalada Somaliya. “Sida loogu qaybinayo [dhaqaalaha] mamaulada gobalada Somaliya waxa awoodeeda loo daayay dawladda Somaliya.” Ayaa ku jirta mid ka mid ah qodobada heshiisku.
Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo, wax war ah kamay soo saarin heshiiskan oo lagula wareegayo hanti, qalab iyo maamul, taas bedelkeedna Madaxweyne Siilaanyo wuxuu wadanka Turkiga u joogaa diyaarinta wejiga saddexaad ee wada hadalada Somaliland iyo Somaliya, kaas oo loo qoondeeyay bisha November ee sannadkan. Waxase isweydiin mudan waxyaabaha laga wada hadlayo, mar haddii ay dawladdii Somaliya jebisay heshiiskii.?
Geesta kale, xukuumadda Somaliland oo caan ku ah inay tiraba dhawr wasiir ka jawaabaan eedaha kaga yimaada xisbiyada mucaaradka ah iyo siyaasiyiinta kale ee madaxabanaan, ayaa waxay dhinaca kale ka gaabisaa inay ka hadasho arrimaha qaranka saamaynta ku leh ee kaga yimaada dhinaca dibadda, kuwaas oo uu heshiiskani ka mid yahay. Madaxweyne Siilaanyo, ayaa ku sugan wadanka Turkiga, waxaanu sheegay inuu rajo wanaagsan iyo niyad sami ka qabo wada hadalada labada wadan u furmaya bisha dambe ee November.
Si kastaba ha ahaate siyaasadda ka dambaysa wada hadalada Turkiga ka socdaa ee u dhexeeya Somaliland iyo Somaliya waa kaaf iyo kala dheeri. Xukuumada Somaliland waxay u muuqataa inay weji daacad ah ku galayso, waxaanay markii wejigii labaad ee wada hadalka laga soo noqdayba xayiraadii ka qaaday duulimaadyada Qaramada Midoobay, iyadoo si deg deg ah ugu sii gogol xaadhaysa heshiiskaas. Hase yeeshe dawladda Xasan Sheekh, waxay u muuqataa inay ciyaarayso munaafaqad diblomaasiyadeed, ujeedada keliya ee ay ka leedahay inay wada hadaladani sii socdaan dadka siyaasadda faaleeya waxay ku xidhiidhinayaan wadanka Turkiga oo ay doonayso inaanu xidhiidhkoodu ka go’in, maadaama oo uu Somaliya ka fuliyo mashaariic tiro badan oo horumarka khuseeya.	Published in
« Axmed Madoobe Oo Shir Jaraa’id Ku Qabtay Kismaayo Oo Ku Celiyay Inaysan ka Qayb Galeyn Shirka Muqdisho Ee Dib U Heshiisiinta	Baarlamaanka Soomaliya Oo 44 Sanno Kadib Xubin Ka Noqday Midawga Baarlamaanka Caalamka (Sawirro) »
Wararkii U Danbeeyey Daawo Mudaharaad Ka Dhacay Degmada Boorama Oo Looga Soo Horjeedo Imaanshiiyaha Madaxweynihii Hore Ee AwdalState (Video)
Soo Dhaweyntii Madaxweynihii Hore Ee AwdalState Oo Isku Badashay Rasaas Iyo Rabash.
Read more...	Afar Dhakhtar Oo Lagu Dilay Dagaan Siinka Dheer (Dhagayso Ama Akhriso Warbixin Buuxda)
Read more...	Doctors Graft Severed Hand On To Ankle
Haween La Baray Kuliyada Nurse-ka ee Jaamacadda Camuud ayaa maanta shahaadooyin gudoonsiisay 20 arday oo Read more
Boliska Kenya Oo Booliska Kenya ayaa maanta saxaafadda u soo bandhigay sawirka wiil Soomaali ah oo la sheegay in uu Read more
Saraakiil Alsahabaaba Oo
Madax ka tirsan Kooxda Al shabab-Al Qaeda, ayaa lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo,